Eyona nto ibalaseleyo kwi-SEBI Brokers | Egcweleyo Funda isiKhokelo soRhwebo ngoMeyi 2
Abadayisi ababhalisiweyo abagqwesileyo be-SEBI 2022-Funda urhwebo lwe-2
ICandelo lezoKhuseleko kunye neBhodi yoTshintshiselwano yaseIndiya (i-SEBI) yazalwa ngasemva koMthetho wePalamente kwaye liqumrhu elilawulayo lezixhobo zemali eIndiya.
Xa kuziwa kurhwebo lwe-forex e-India, ithathwa njengelityala elingafumanekiyo phantsi komthetho we-FEMA - oko kukuthi ngaphandle kokuba isiseko semali kwisibini yiRupee (kwimeko leyo kusemthethweni).
Kukho amarhe okuba kukho utshintsho kwezemali kwikona, kwaye iBhanki enguVimba yaseIndiya (i-RBI) imiselwe ukuguqula imida yayo ngenxa yoko. Njengokuma nje akukho lutshintsho lwenziweyo, ke ukurhweba ngababini akukabikho semthethweni (njengakwamanye amazwe).
Ngale nto engqondweni, abathengisi be-SEBI abaziwayo akukho lula ukuyifumana. Kwangokunjalo, abanye abarhwebi bayasokola ukufumana umthengisi oselunxwemeni owamkela abatyali mali baseIndiya.
Nangona kunjalo, sifumene i-5 ye-SEBI broker elungileyo ukuba uyiqwalasele. Siza kudlulisa ulwazi oluncedo ngokubhekisele kwinto ekufuneka ujonge kuyo xa ukhetha umrhwebi othembekileyo kunye nendlela yokubhalisa.
Ngasekuqaleni kweminyaka yee-1980, iibhanki ezingamanyala zaziphula kakhulu imithetho kwaye nabarhwebi babandezeleka. Ngapha koko, oosomashishini abanomthunzi abachasananga nokwenza amaxabiso aphezulu kwi-stock exchange. Oku kukhokelele kukungabikho kokuthembakala kwindawo yezemali.
Phambi komthetho we-SEBI, wowe-1992, yayiyiCCI (Umlawuli weMicimbi eNkulu) eyayilawula imarike yezemali yaseIndiya, ngelixa i-Capital Issues Act ka-1947 yayilawula indawo yotyalo-mali. Ukukhawulezisa ukuya ku-1992 kwaye i-SEBI yadalwa njenge-arhente yolawulo lomgaqo-siseko-ethembekileyo kulawulo lweemarike zezemali zaseIndiya.
Ngamafutshane, eli qumrhu lilawula iinkonzo zezezimali, abarhwebi abaphakathi, kunye nabatyali mali. Ngokusisiseko eli ziko lisebenza njengomnatha wokhuseleko ngokubeka imigaqo nemimiselo endaweni ekufuneka ilandelwe kuloo leta. Umbono kukudala intengiso esekuhleni yabarhwebi- kunye nokwenza ukuba abathengisi baphendule ngayo nayiphi na into engekho mthethweni okanye ukusilela ukulandela ikhowudi yokuziphatha ebekiweyo.
Ukufumana njani ukurhweba kwi-SEBI?
Njengoko besesitshilo, umzimba ujonga indlela eziphatha ngayo iimarike zokhuselo kwaye uyakukhusela njengomtyalomali ngokumisela imigaqo engqongqo nemigaqo.
Kukho uluhlu lwemithetho ekufuneka ilandelwe ngabo bonke abathengisi abanamaphepha-mvume, kwaye imigaqo efanayo imele iCAA, iASIC, iCySEC kunye neminye imithetho emininzi. Emva kwayo yonke loo nto, eyona njongo iphambili kukwenza ukuba iimarike zezemali zikhuseleke. Abarhwebi kufuneka babeke phambili uluhlu lwezinto eziphicothiweyo, bahlule abathengi imali, kwaye baphumelele uhlolo olungahleliwe.
Sidibanise inkcazo emfutshane phantsi kwezinye zeemfuno eziphambili zemibutho yolawulo enje ngeSEBI kubarhwebi
Ngenxa yeNkqubo yoKhuthala
Abarhwebi abalawulwayo kufuneka babonise ukuqonda okucacileyo kwenkuthalo efanelekileyo kwiingxelo ezineenkcukacha. Oku kufuna ukwenza inxenye yesakhelo senkampani.
Ukuba umthengi uye kutyalo-mali athi $ 1,000 ngenyanga nganye, ukuya kuthi ga kwi-30,000 yeedola- umrhwebi kufuneka aphande ukuba imali ivelaphi kwaye afake ingxelo kwiqumrhu elilawulayo elifanelekileyo.
Abarhwebi abalawulwayo abangaphumeleliyo ukuthobela imigaqo ye-KYC (Yazi uMthengi wakho) baya kuhlawuliswa. Ukubeka ngokulula, nayiphi na inkampani enikezela ngenkonzo yezemali kufuneka iqinisekise ukuba ngubani umthengi ngamnye ngokwemigaqo ye-KYC.
Amanyathelo ama-4 e-KYC yomthengisi ngala:
Ukufumana igama, idilesi kunye ne-ID yomntu ngamnye wabathengi
Ukuqinisekisa ukuba ulwazi lomthengi luchanekile / ngabo abathi bangabo
Fumana ukuqonda kwimeko yezemali yomthengi
Ukongamela iinzame zokuthengisa zabathengi
Sonke kuye kwafuneka sihambe nge-KYC xa ujoyina indawo ngaphambili, kodwa mhlawumbi ubungazi ukuba yayiyimfuneko esemthethweni. Yonke imigaqo kolu luhlu inceda ukudala indawo yokurhweba ekhuselekileyo necacileyo kuthi sonke.
Ukwahlulwa kweAkhawunti yaBaxumi
Ngelixa ukwahlulwa kweakhawunti yebhanki / yengxowa mali bekukho malunga neminyaka engamashumi amane, ikwangomnye umthetho wokuhambelana nawo. Ngokufanelekileyo, iinkampani zabarhwebi kufuneka zingenise iingxelo zanyanga zonke ukuze zibuyele ngasemva.
Eyona nto iphambili kukuba, abathengisi kufuneka babeke imali yakho kwiakhawunti eyahlukileyo kwiakhawunti yenkampani. Oku kuthetha, umzekelo, kwimeko apho inkampani yomrhwebi iphuma kwishishini, imali yakho ayinakuthathwa njengetyala kwaye ikhuselwe kulwaphulo-mthetho lwezezimali.
I-SEBI kutsha nje yazisa ngenkqubo eyongezelelweyo yokulwa ukuphathwa gadalala kwamalungelo abathengi. Inkqubo isekwe kwi-Intanethi kwaye igcina iinkcukacha zabathengi kunye nalapho zigcinwe khona.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa le nkqubo iya kubandakanya ukhuseleko oluqokelelwe ziidipozithi, utshintshiselwano kunye neenkampani ngokubhekisele kuko konke ukurhweba. I-SEBI ke iyakwazi ukuthelekisa idatha kunye neakhawunti eyehliswe umzimba kunye nokunikezelwa kwedatha evela kubarhwebi ngomhla olandelayo.
Abarhwebi be-SEBI banyanzelekile ngokusemthethweni ukuba bangenise uphicotho-zincwadi lonyaka. Qaphela, abalawuli nabo baqhuba ukukhangela okungahleliwe kwaye banokufuna ukubona olu lwazi lulandelayo ngokuwa komnqwazi:
Iinkcukacha zazo zonke iiasethi zezemali ezithengisiweyo (kubandakanya ivolumu)
Iirisithi zeeasethi zodidi oluphantsi
Ukwahlulwa ngokupheleleyo kweefizi
Inkcazo ecacileyo yayo nayiphi na into esetyenzisiweyo enikiweyo
Umahluko phakathi kwee-odolo ezenziwe ngumthengi, kunye nezo zenziwe ngumrhwebi
Xa kufunyanwa uphicotho-zincwadi lungaphelelanga (ulwazi olulahlekileyo) emva koko le mibutho iya kuyifumana inkampani ekuthethwa ngayo. Kwiminyaka embalwa edlulileyo, emva kokujongwa ngokungacwangciswanga kwiminyaka emi-3 ngaphambili, i-SEBI yafumanisa ukuba inkampani ethengisa izabelo eIndiya yayingathobeli imithetho yayo. Umrhwebi wahlawuliswa i-Rs 1.1 yezigidi ngokungathobeli i-AML kuphela, kodwa kunye ne-KYC kunye nokwahlula imali.
Ndinokurhweba ngantoni noMthengisi ovunyiweyo we-SEBI?
Bonke abathengisi bahluka kancinane xa kufikwa kumba wokwahluka kweeasethi. Ngesi sizathu, ukuba kukho iasethi ofuna ukugxila kuyo yonke kuya kufuneka ujonge ukuba umrhwebi ubonelela ngeasethi. Abanye abathengisi bagxila kuphela kwi-cryptocurrensets umzekelo, ngelixa abanye benekhathalogu epheleleyo yeeklasi zeeasethi onokuthi uzithengise.
Ukukunika inkuthazo, sidwelise ezinye zeasethi ezinikezelwa kwiqonga lokuthengisa eliseIndiya.
Kude kube namhla urhwebo lwempahla luchatshazelwa kakhulu yimicimbi yokwenyani. Isizathu sokuba, banobomi bokwenyani obuphathekayo-cinga igolide, isilivere, amandla, kunye ioyile.
Izidubedube zezopolitiko kunye neziganeko ezinkulu zehlabathi zinokuba nefuthe elikhulu kwiimarike, ezinje ngempembelelo yokuhanjiswa kweoyile xa i-US ihlasela i-Iraq ngo-2003.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokuhlela izinto, nokuba kunjalo, oku kwahlulwe phakathi 'kobunzima' kunye 'nothambileyo'. Ngokubanzi, iimveliso ezithambileyo zenziwe zizinto ezikhulayo. Oku ngamanye amaxesha kubhekiswa kuko 'njengokutya kunye nefayibha yorhwebo' okanye 'izinto zetropiki'.
Nayi eminye imizekelo yezinto ezithambileyo:
Xa kuziwa kwizinto ezinzima, oku kuhlala kubhekisa kwizinto ezifuna ukukhutshwa, okanye ukumbiwa.
Nayi eminye imizekelo yezinto ezinzima:
Izitokhwe kunye nokuBelana ngokuThengisa
Izitokhwe zilungile ukuba ucwangcisa ukutyala imali kwixesha eliphakathi ukuya kwelide. Le ntengiso inamandla okwenyani njengoko isitokhwe ngasinye siya kuchaphazeleka ngenxa yeziganeko ezinje ngokutshintsha kwexabiso, iindaba, iimveliso ezintsha ezisungulwa kunye neengxelo zengeniso.
Ungathenga kwaye uthengise izabelo kwaye ukhethe kwiinkampani ezininzi zehlabathi. Imizekelo embalwa yesitokhwe esaziwayo kubathengisi baseIndiya yile: GoPro, Ford, Apple, Amazon, Disney, Tesla kunye namawaka angaphezulu.
Xa ukurhweba ngamasheya e-India-ukuvula indawo ende (yokuthenga) ngaphandle kokuphakanyiswa kuthetha utyalo-mali lwakho kwisitokhwe esisezantsi-ke loo nto iya kuthengwa ngegama lakho. Kukho ke Urhwebo lweCFD esiza kuthetha ngayo ngokulandelayo.
IiCFDs (ikhontrakthi yomahluko)
Amaqonga okurhweba afana ne-eToro, umzekelo, vumela amaIndiya ukuba asebenzise iiCFD. Oku kuthetha ukuba abarhwebi bayakwazi ukuvula izithuba ezimfutshane (ezithengisayo), benze olona xabiso lukhulu kwaye kunjalo- bavule nezikhundla ezinde.
Nceda uqaphele ukuba ngokwe-RBI, isibonelelo asivumelekanga xa usebenzisa umthengisi we-SEBI. Nangona kunjalo-kwaye njengoko besesixoxile ukuza kuthi ga ngoku-uninzi lwabarhwebi baseIndiya baya kusebenzisa amaqonga aselunxwemeni alawulwayo anelayisensi kwizizwe ezinjenge-UK, i-EU, i-Australia, okanye iSingapore.
Uninzi lwamaIndiya luvile ngeBitcoin. Kukho ii-cryptocurrensets ezahlukeneyo ezingaphezu kwe-2,000, ngakumbi ezenziwayo minyaka le.
Nazi ezinye zezona asethi zithengiswayo ze-crypto ezikhoyo kumaIndiya.
Ii-cryptocurrensets zibonisa ukungazinzi okuphezulu kwaye zihlala ziguquka zibe ngamanani aphindwe kabini, kusuku olunye lokuthengisa.
Ngapha koko, licebo elilungileyo ukuqala ngokurhweba ngee-cryptocurrensets kwiakhawunti yedemo ngaphambi kokubeka emngciphekweni imali yakho.
Imarike nganye yesitokhwe ine 'index' yayo, okanye 'ii-indices' ezininzi-zonke ezibonisa imeko yelo candelo lentengiso. Ngenxa yokuba ii-indices zenziwe ngeemfumba zeeasethi ezahlukeneyo, zithathwa njengezizinzile ngakumbi kunestokhwe esahlukileyo.
Xa inkampani enye iqhuba kakuhle, ngakumbi enye inobunzima obungaphezulu, oku kunokuphakamisa yonke ibhalansi yesalathiso. Kumaqonga athile, anje nge-eToro, ii-indices zithengiswa njengee-CFDs (jonga apha ngasentla) kuba azinakho ukutyalwa imali ngokutsho.
Imizekelo yezalathiso ezithandwayo zibandakanya i-S & P 500, FTSE 100, NASDAQ 100, kunye neDow Jones 30.
Ukulungiselela ukurhweba kwihlabathi liphela kwimarike Forex, Kuya kufuneka ubenomthengisi emva kwakho ukuze yenzeke. Njengoko uyazi, e-India unokurhweba kuphela ngababini be-forex ezibandakanya i-INR (i-Indian Rupee, .t
Imizekelo ibandakanya: i-EUR / INR, i-USD / INR, i-JPY / INR kunye ne-GBP / INR.
Kwi-forex, kukho iindidi ezi-3 zeerandi zemali - ii-exotic, majors, kunye nabantwana. Apha zi eminye imizekelo yohlobo ngalunye:
Izibini zeFX ezingaqhelekanga: USD / HKD, AUD / MXN, NZD / SGD, EUR / ZAMA, GBP / ZAR kunye JPY / NOK
Izibini ezinkulu zeFX: I-EUR / USD, i-USD / i-JPY, i-AUD / i-USD, i-NZD / i-USD, i-USD / i-CAD, i-GBP / i-USD, i-NZD / i-USD, kunye ne-USD / CHF
Izibini ezincinci zeFX: I-EUR / AUD, i-NZD / i-JPY, i-EUR / i-GBP, i-GBP / i-JPY, i-GBP / i-CAD, kunye ne-CHF / JPY
Abanye abathengisi baseIndiya basebenzisa ii-e-wallets ezinje ngeSkrill kunye neNeteller ukuhambisa imali kwi-India. Amaqonga orhwebo afana ne-eToro azakuguqula uluhlu lweemali zibe ziidola zaseMelika ukuze zenze urhwebo kunye nomgangatho (oku kuza nentlawulo yokuguqula eyi-0.5%).
Uyifumana njani i-SEBI Broker elungileyo
Njengoko sichukumisile, ukuze usebenzise umrhwebi waphesheya kuya kufuneka uqale uqiniseke ukuba bayalawulwa kwaye banemvume esemthethweni yokwamkela abahlali baseIndiya.
Azikho 'i-SEBI brokers' ngolu hlobo, kodwa kukho i-SEBI evunyiweyo yabarhwebi eyenza ukuba abantu baseIndiya bathengise kwilizwe labo, kwiimarike kwihlabathi liphela.
Kukwacetyiswa ukuba kuqinisekiswe ukuba umrhwebi ulawulwa ubuncinci elinye iqumrhu elinjenge-FCA okanye i-ASIC. Ngale ndlela, uya kufumana ukukhuselwa kwengxowa-mali.
Umzekelo, i-eToro- ayisiyiyo kuphela yamaqonga ezorhwebo aziwayo eIndiya, kodwa kwihlabathi liphela- yi-SEBI bhaliswe umrhwebi. Ikwalawulwa yi-FCA, ASIC, kunye neCySEC.
Inkqubo-sikhokelo yekhomishini yomrhwebi oqinisekileyo yenza umahluko kwinzuzo yakho. Emva kwayo yonke loo nto, veki nganye okanye ephumayo ngenyanga kufuneka uyiqwalasele xa ucwangcisa uhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa.
Ukukunika umbono wokuba iifizi zekhomishini yomrhwebi zinokusebenza njani nceda ujonge umzekelo wethu ongezantsi:
Masicinge ukuba uthengisa nge-USD / INR
Ubiza i $ 2,000
Kule meko, umthengisi uya kuthatha ikhomishini eyi-12 yeedola ($ 2,000- 0.6% = $ 1988)
Iindaba ezimnandi zezokuba sihlala sicebisa abathengisi be-SEBI (okanye amaqonga alawulwayo amkela amaIndiya) akuvumela ukuba urhwebe ngaphandle kwekhomishini.
Ii-asethi ziyafumaneka kuwe
Amathuba kukuba ungumrhwebi omtsha, unokufuna kuphela ukujonga ingqalelo kwimpahla enye okanye ezimbini. Njengoko usiba namava ngakumbi kwiimarike, unokuthatha isigqibo sokutshintsha iphothifoliyo yakho. Ukuze wenze oko kufuneka ube nezinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo.
Akukho babarhwebi banye abalinganayo, ke ukuba unomdla wokwenene kuphela kwi-forex umzekelo, ke qiniseka ukuba umrhwebi ubonelela. Ngaphaya koko, sicebisa ukuba ukhethe inkampani enoluhlu lweeasethi, ukuba ufuna ukwahluka kamva ezantsi emgceni.
Sebenzisa i-eToro njengomzekelo-abahlali baseIndiya banokufaka kwaye barhoxe imali basebenzise ezi ndlela zilandelayo zokuhlawula:
Ukutshintshwa kweBhanki yeHlabathi
Ngokubaluleka, khumbula ukuba kwiqonga elifana ne-eToro kuyakufuneka ufake i-USD, ke uya kuhlawuliswa imali encinci yokuguqula eyi-0.5%. Njengoko besesitshilo, abanye abathengisi baseIndiya bakhetha ukusebenzisa i-e-wallets ezinje ngeSkrill ukuze bangahlawuli kwibhanki yaseIndiya.
Ayisiyomirhumo yekhomishini kuphela enokuthi ichaphazele inzuzo yakho yorhwebo, njengoko ukusasazeka kunokwenza umahluko omkhulu nawo. Kokwenu abangaziyo, i sasaza yayo nayiphi na i-asethi eboniswe kusetyenziswa 'iipipi' Iipipi ngumahluko phakathi kwexabiso 'lokuthenga' kunye nexabiso 'lokuthengisa' kwempahla yexabiso ekuthethwa ngayo.
Nanku umzekelo olula wendlela iipipsi eziboniswa ngayo:
Masithi i-USD / INR inexabiso lokuthenga lama-68.8000
Esi sibini sinexabiso lokuthengisa lama-68.8004
Kule meko, i-USD / INR inokusasazeka kwee-4pips, njengoko oku kubonisa umsantsa phakathi kwala maxabiso mabini
Kananjalo, kuya kufuneka ukonyuse utyalo-mali ngeepipi ezi-4 ukuze uphule
Kwakhona, sihlala sinamathela kubarhwebi be-SEBI ababonelela ngokusasazeka okuqinileyo. Oku kuqinisekisa ukuba iindleko zakho zokurhweba uzigcina ubuncinci.
Iimpawu zoHlahlelo lobuGcisa
Uninzi lwamaqonga orhwebo aseIndiya abonelela abathengi ngezixhobo zohlalutyo lobuchwephesha njengenxalenye yenkonzo. Uhlalutyo lobuchwephesha kunye nokufunda kwitshathi kubalulekile xa kuziwa kurhwebo ngempumelelo. Izixhobo ezingcono zibangcono, ngakumbi kwimeko yorhwebo lwemali.
Apha ngezantsi sidwelise ezinye zezona zixhobo ziluncedo ezikhoyo kubarhwebi baseIndiya namhlanje:
Kungathatha iinyanga ezininzi ukufunda ukuba izalathi zobuchwephesha zisebenza njani, ke kuyakufuneka unikezele ixesha elininzi uqonde urhwebo lwakho ngaphambi kokubeka emngciphekweni inani elikhulu lemali.
Ukuba kunokwenzeka ukuba umtsha xa kufikwa kuthengiso, izixhobo zemfundo kunye nezixhobo ezifumaneka kwezinye iiwebhusayithi ezinamandla zingasindisa ubomi. Abahwebi bawo onke amanqanaba ezakhono bafunga ngedatha yentengiso ebukhoma, iitshathi kunye nezixhobo zokubonisa, ke kusengqiqweni ukujonga umxholo wemfundo ofumanekayo kuwe.
Ukwazi indlela yokuqonda iipateni zamaxabiso ezembali kunye neegrafu zokubuyela umva kunokukunceda ekuqikeleleni iimvakalelo zentengiso kwikamva- njengoko iindlela zihlala zibuya.
Enye into enokuthi ithathelwe ingqalelo njengesixhobo semfundo ziiakhawunti zedemo. Ziyindlela ebalaseleyo yokufunda iintambo zayo nayiphi na into yorhwebo ntengiso mgangatho.
Khumbula nje ukuba, umzekelo, urhwebo lwakho lusekwe e-UK-uya kuba ziiyure ezi-4 ezinesiqingatha ngaphambili. Ukuba umrhwebi wakho ebehlala eWashington, umzekelo, ubuya kuba ziiyure ezingama-9 nesiqingatha ngaphambili.
Ngesi sizathu, kuya kuba ngcono kakhulu kuwe ukuba iqonga lakho lomthengisi libonelele ngeendlela ezahlukeneyo zokuxhasa abathengi ezinje ngengxoxo ebukhoma, i-imeyile, umnxeba kunye nefom yokunxibelelana nabantu esizeni. Inkampani enecandelo elibanzi le-FAQ nayo inokuxabiseka kakhulu ukuba uncedo alufumaneki 24/7.
Ungabhalisa njani nge-SEBI Broker
Kukho malunga ne-300 ye-SEBI e-broker e-India, kodwa akufuneki iphelele apho. Emva kwayo yonke loo nto, amaqonga okurhweba kwi-Intanethi ahlala esekwe phesheya.
Ukuba usafuna inkuthazo xa kuziwa ekukhetheni iqonga elifanelekileyo le nina, Sibhalise abarhwebi bethu abaphezulu abahlanu ukuya esiphelweni seli phepha. Ukhetho ngalunye lilawulwa yimizimba ephezulu evela kwihlabathi liphela, njenge-FCA ASIC kunye neCySEC.
Xa wenze uphando kwaye wafumana i-broker eyamkela abathengi kwindawo yakho yehlabathi (njenge-5 esele siyidwelisile), emva koko unokulandela amanyathelo ethu alula ukuze uqalise.
Ngaphambi kokuba uqalise kuya kufuneka ubhalisele i-brokerage efanelekileyo. Yiya kwiwebhusayithi esemthethweni kwaye ucofe 'bhalisa'.
Apha kuyakufuneka unikeze igama lakho kunye nefani yakho, idilesi yasekhaya, umhla wokuzalwa, kunye nolunye ulwazi lomntu. Kuya kufuneka ukhethe igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, kunye nedilesi ye-imeyile.
Inyathelo 2: Zichaze
Sichazile ngakumbi eli phepha malunga nokubaluleka kwe-KYC -mgaqo ongqongqo obekwe yimibutho yolawulo. Bonke abathengisi abanesidima baya kucela ifoto ecacileyo yepaspoti yakho yaseIndiya, ikhadi lesazisi okanye iphepha-mvume lokuqhuba.
Emva koko, umrhwebi uza kukucela ifoto yetyala elisandula ukwenziwa okanye ingxelo yebhanki enegama lakho elipheleleyo nedilesi kuyo. Amathuba kuya kufuneka uphendule imibuzo embalwa enxulumene nemeko yakho yezemali enjengamava okuthengisa angaphambili, imeko yengqesho kunye nomvuzo.
Siye sangena kwezona ndlela zedipozithi zixhaphakileyo, ngenxa yoko ngoku kufuneka ukhethe indlela yokubhatala ofuna ukuyisebenzisa, kwaye uxhase ngemali iakhawunti yakho entsha yomthengisi.
Ukuba uziva ukulungele ukungena ngaphakathi kwaye uqale ukurhweba unako. Ukuba uyi-newbie xa kuziwa kurhwebo ke sicebisa ukuqala ngemali encinci, okanye ukuzama iakhawunti yedemo de ube uziva ukulungele ukurhweba ngemali yokwenyani.
Abathengisi abalawulwa kakuhle be-SEBI be-2022
Ke ngoku uyazazi zonke iimetriki ekufuneka uzikhangele xa usakhangela i-brokerage elawulwayo e-Indiya, besicinga ukuba siza kudibanisa uluhlu lwabathengi bethu abaphezulu aba-5 abamkela abathengi baseIndiya.
1.I-AvaTrade- Ilungele abaQalayo
I-AvaTrade yindawo eyaziwa ngokuba ngumrhwebi phakathi kwabarhwebi. Indawo ilawulwa kwimimandla emi-6 kwaye uya kuba nakho ukufikelela kuninzi lwezixhobo ezinje nge-forex, ii-stocks, ii-indices, izinto zorhwebo, ukhetho, ii-ETFs, ii-cryptocurrencies, kunye neebond.
Kanye nokuba nezinto ezingaphezulu kwewaka onokukhetha kuzo, eli qonga yinkonzo yeelwimi ezininzi eneelwimi ezili-15 zeenkonzo zabathengi. Ukuba umtsha kurhwebo, iqonga le-AvaTrade uligubungele ngenyathelo ngesikhokelo sendlela yokuthengisa kwi-Intanethi.
Inkampani inayo usetyenziso lwayo ekuthiwa yi-AvaTrade GO ngokuqinisekileyo ekufuneka uyijongile. Itholakala ngeGoogle Play ye-Android kunye ne-App Store yabasebenzisi be-iOS. Iqonga likwaxhasa iMetaTrader4 elungileyo kuhlalutyo lobuchwephesha.
Uhlelo lokusebenza lwe-AvaTrade GO
Ukuqokelelwa kwezifundo zevidiyo ezifundisayo
Imimandla emithandathu yokulawula
Imirhumo yokungasebenzi iyahlawulwa
Inkonzo yomthengi ecothayo
I-Capital.com ikuvumela ukuba uthengise ubhedu ngokusebenzisa ii-CFD zempahla. Okanye, unokurhweba nge-stock CFDs yeenkampani zemigodi yobhedu ezifana ne-Southern Copper Corp. Ivunywe yi-FCA, i-CySEC, i-ASIC, kunye ne-NBRB i-brokerage ngoku inabathengi abangaphezu kwe-700,000.
I-Indiya inabantu abaphantse babe yi-1.4 yezigidigidi zabantu, kodwa zizigidi ezingama-20 kuphela abathengisayo. Oko kwathethi, eli nani libonakala likhulile okoko kuyekwe ukutshixwa ngenxa yobhubhane we-COVID-19 wehlabathi.
E-Indiya, abarhwebi balawulwa yi-SEBI. Nangona kunjalo, umzimba awukhuphi iilayisensi. Ngapha koko, kwakusekuqaleni kwee-90s apho iarhente yanikwa igunya lokulawula iimarike zentengiso.
Sele sichazile ukuba ukurhweba ngezezimali ze-FX (ngaphandle kokuqulatha i-rupee) akukho semthethweni kwaye ke kulityala eIndiya. Kodwa, konke akulahlekanga. Abarhwebi abaninzi eIndiya bakhetha ukurhweba ngokusebenzisa abathengisi abaziwayo nabaziwa phesheya njenge Skilling, Capital.com kunye neAvaTrade.
Ngaphambi kokuba ukhethe umthengisi, soloko usenza uphando, qiniseka ukuba iqonga lilawulwa liqumrhu elisemthethweni, qinisekisa ukuba bayazamkela abathengi baseIndiya, kwaye bahlala bejonga iifizi kunye nemigaqo.
I-SEBI sisichazi esithi 'iBhodi yoKhuseleko kunye neTshintshiselwano yaseIndiya', eli ziko liphetheyo kulawulo lweemarike zezemali eIndiya.
Kutheni le nto kufuneka ndisebenzise umrhwebi olawulwayo?
Kuyacetyiswa ukuba ujongane nabarhwebi abalawulwa yimizimba efana neCAA, ASIC, kunye neCySEC, njl. Isizathu kukuba iimali zakho zikhuselwe ngala maqumrhu aphezulu, ungasathethi ke ukuba ngumrhwebi kufuneka ulandele imigaqo engqongqo ekuhleni kunye nokhathalelo lwabathengi.
Bonke abathengisi abalawulwayo benza inombolo yobhaliso yomzimba othile ibonakale eqongeni ekubhekiswa kulo. Ukuba ufuna ukujonga, unokuya kwiwebhusayithi yequmrhu elilawulayo kwaye ujonge inkampani kunye nenombolo yerej.
Ngaba ukuthengiswa kweemali akukho semthethweni eIndiya?
Ewe-ukuba uyarhweba ngeebhangqa ze-forex ezingabandakanyi i-rupee lityala elingafumanekiyo.
Ngaba ndingarhweba nge-forex kwi-eToro nge-Indian rupee?
Hayi. I-eToro ikuvumela ukuba urhwebe ngeedola zaseMelika, kodwa iindaba ezimnandi zezokuba i-eToro yamkela abathengi abavela kwiindawo ezingaphezu kwama-60 kwihlabathi liphela, kubandakanya ne-India. Kufuneka uhlawule umrhumo wokuguqulwa we-0.5%.